DHAGAYSO: Maxaa ka ogtahay danaha Qarsoon ay dowlada Qadar ka leedahay Soomaaliya iyo Sirdoon Caalami ah oo ka qoray Warbixin..? | Garqaad News Agency
DHAGAYSO: Maxaa ka ogtahay danaha Qarsoon ay dowlada Qadar ka leedahay Soomaaliya iyo Sirdoon Caalami ah oo ka qoray Warbixin..?
Nov 7, 2017 - Comments off
Shabakada Warbaahinta Garqaad.com ayaa heshay nuqul warbixin sirdoon oo laga qoray Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Mudane Fahad Yaasiin.
Warbixinta oo loo malaynayo in ay qoreen dawladaha Soomaaliya Ciidanka ka joogaan ayaa looga hadlay taariikhda Fahad Yaasiin. Waxaa warbixinta lagu sheegay Fahad in uu yahay xubin sare oo ka tirsan Ururka Al-ictisaam, garabkiisa Jihaadiga ah.
Waxaa kaloo lagu sheegay in uu ku dhuuman jiray magaca Taleefishinka Aljazeera, laakiin uu ahaa sarkaal ay tababareen sirdoonka Qatar, isagoo ahaa isku xirana Alshabaab iyo Dawlada Qatar.
Warbixintu Waxay sheegtay in uu laf dhabar u ahaa ololihii doorasho ee Farmaajo, isagoo isku duway koox ka tirsan Ururka Al-ictisaam garabkiisa Jihaadiga ah.
Ragaas ayaa waxaa ka mid C/risaaq Shoole, oo ah ku xigeenka Fahad Yaasiin, C/shakuur Cali Mire oo ah Xildhibaan Baarlamaanka ka tirsam, Jaamac Caydiid oo haatan safiir ka ah Dalka Turkiya, Saciid Ciid oo ah Wasiirka Beeraha.
Warbixintu Waxay kaloo sheegtay in uu Fahad ololihiisa hoos uga darsaday rag kale oo uu balanqaad u sameeyey Hadii Farmaajo guulaysto.
Ragaas ayaa waxaa ka mid ah Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre, Taabit Cabdi, Gudoomiyaha Gobolka, Jamaal Xasan Wasiirka Qorshaynta, Abdirashid Mohamed, Wasiirka Batroolka.
Ragaas ayaa lagula heshiiyey in ay xog iyo warbxino ka keenaa ololaha doorasho ee Xasan Sheekh oo ay dhamaantood ka mid ahaayeen.
Waxay kaloo warbixintu sheegtay in Fahad iyo Xasan Kheyre ay is barteen xiligii uu Kheyre ahaa Agaasimaha hay’adaha Qaxootiga ee Norway.
Dawalda Norway iyo Dawlada Qatar ayaa ka wada shaqaynayey dib u heshiisiinta Alshabaab iyo Dawlada Soomaaliya. Xasan iyo Fahad waxay u qaabilsanaayeen xiriirinta Hogaanka Alshabaab iyo Dawladahaas, waana taas tan keentay in Hay’adaha dabagal ka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan cunaqabtayn hubka ay ku eedeyso Kheyre in uu xiriir la leeyahay Ururka Alshabab.
Ka sokow in uu yahay Agaasimaha Xafiiska Madaxweynaha, ayey warbixintu sheegtay in Fahad wuxuu weli madax u yahay kooxdii kala shaqaysay ololaha doorashada ee Madaxweyne Farmaajo, kuuwaasoo qaarkood ay xilal waawayn Dawlada ka hayaan, halka kuwa kale ay kala shaqeeyaan ururinta Xildhibaanada iyo dhismaha xiriir xildhibaanada iyo Madaxtooyada.
Wuxuu kaloo gacanta ku hayaa lacagta kaashka ah ee Qatar sida toos ka ah uga timaada. Arrimahaas oo la isku geeyo ayaa ka dhigaysa Fahad in uu noqdo ruuxa ugu awooda badan Dawlada uu Farmaajo hogaamiye.
Fahad iyo Farmaajo ayey warbixintu sheegtay in aragti badan ay isaga mid yihiin Alshababa sida; nacaybka Federaalka, AMISOM, Reer Galbeedka iyo doonista Somaali wayn.
Labada nin ayaa la sheegay in aysan aamin sanayn Ciidanka Soomaaliya una arkaan Ciidan qabiil, sidaas daraadeed ayey rabaan in ay abuuraan ciidan Difaaca shacabka iyo Ciidan Gaar ah oo lagu magacaabo Jihaaz Amni Siyaasi, markii Fahad ama Shoole midkood loo dhiibo hay’adda Nabadsugidda.